2021 / 06 / 10 Raha tsy izanyMamelana tanteraka i Hydrangea.
Shiro Ozaki, izay heverina ho olona afovoan'ny tanànan'i Bunshi Magome, dia namerina ny trano nandaniany 1964 taona hatramin'ny nahafatesany tamin'ny 39 (Showa 10) ary nampiasaina ho efitrano fahatsiarovana.Nifindra tany amin'ny faritra Sanno i Shiro tamin'ny taona 1923 (Taisho 12) ary nahazo toerana matanjaka ho mpanoratra malaza noho ny fahatongavan'ny "Life Theatre".
Ny Ozaki Shiro Memorial Hall dia nosokafana tamin'ny Mey 2008 mba hampahafantarana ny trano fonenan'i Shiro teo aloha (efitrano fandraisam-bahiny, fandalinana, fitehirizam-boky, zaridaina) hampitana ny fahatairana ao amin'ny Village Magome Bunshi ho an'ny taranany.Manantena izahay fa olona maro no hampiasa ity efitrano fahatsiarovana ity amin'ny faritra mangina miaraka amin'ny maitso maitso ho fototra vaovao hijerena an'i Magome Bunshimura.
Hijery ny atiny Panorama amin'ny fampiasana fakantsary 360 degre.Afaka miaina fitsidihana virtoaly ao amin'ny Ozaki Shiro Memorial Hall ianao.
Efitra fiasana sy fampirantiana ao amin'ny Hall Fahatsiarovana an'i Shiro Ozaki, entana ankafizin'i Shiro, ary sary misy ny efitrano fahatsiarovana.
9: 00 mankany 16: 30
* Tsy afaka miditra amin'ilay trano ianao